Iwe Unotsvaga Injini Inotarisira Kana Iwe Uchishandisa Drupal? | Martech Zone
Zvemukati Management Sisitimu uye SEO
Yakawanda sei inoita Zvemukati Management Systems (CMS), senge WordPress, Drupal, Joomla!, ita chikamu mu Search Engine Optimization (SEO)? Zvirokwazvo yakaipa saiti dhizaini (kwete yakachena maurls, zvakashata zvemukati, kusashandiswa zvakanaka kwemazita emadomeni, nezvimwe) muCMS senge Drupal icha kukanganisa SEO (maturusi makuru anoshandiswa nenzira yakaipa nzira). Asi zvemukati manejimendi masisitimu pachawo anokweretesa kune zvirinani SEO pamusoro pevamwe, kana mamwe maitiro akanaka akaitwa? Uye, kusanganisa masystem (ex, WordPress kana Drupal blog inotsigira a Shopify saiti) inokanganisa SEO (zvakare uchifungidzira zvimwe zvese zvakanaka SEO maitiro anoteedzerwa)?
Kubva pane yekutsvaga injini yekuona, hapana musiyano pakati peDrupal, WordPress, kana Shopify. Ndisati ndarohwa ne "Mira kweminiti", rega ndijekese. Majini ekutsvaga anotarisa iyo HTML iyo yavanopihwa kudzoserwa kwavari pavanokamba zvinongedzo. Ivo havasi kutarisa kune dhatabhesi kuseri kwewebhu uye ivo havasi kutarisa kune iyo admin peji inoshandiswa kugadzirisa iyo saiti. Ndeapi mainjini ekutsvaga ari kutarisa iyo HTML inogadzirwa, kana kushandurwa, neyemukati manejimendi sisitimu.
Semuenzaniso: Kana uchishandisa Drupal, unofanirwa kuita sarudzo yekutendeuka yakachena ma URL. Haufanire kushandisa yakachena ma URLS, asi kana ukadaro, unowana URL inonzwisiswa nemunhu (ex: http://example.com/products?page=38661&mod1=bnr_ant vs http://example.com / kubvunza / kushambadzira). Uye, hongu, akachena ma URL anogona kubatsira SEO.
Mumwe muenzaniso: Drupal, kuburikidza neayo Pathauto module, ichagadzira zvinonzwisisika ma URL zvichibva pamusoro wepeji. Semuenzaniso, peji rakanzi "10 Zviitiko zveZhizha zveVana Vako" rinobva rawana URL ye http://example.com/10-summer-activities-for-your-kids. Haufanire kushandisa Pathauto asi iwe unofanirwa sezvo zvichibatsira kuti iyo peji re URL ive nyore kuti vanhu vaverenge nekurangarira.
Wokupedzisira muenzaniso: Saiti mepu batsira injini dzekutsvaga kuti unzwisise zviri pane yako saiti. Kunyange iwe uchikwanisa kugadzira wega (ug) mepu yesaiti uye kuendesa kuGoogle kana Bing, iri basa rakakodzera zvirinani kumakomputa. Drupal's XML Sitemap module inofanirwa kuve nayo sezvo inogadzira otomatiki uye inochengetedza iyo mepu saiti mafaera uye inopa kugona kuendesa iwo kunjini dzekutsvaga.
Google kana Bing havanyanye kufarira kuti unoshandisa Drupal kana kwete, zvese zvavanonyanya kufunga nezvazvo zvinobuda muDrupal. Asi iwe unoda kutarisirwa nezve kushandisa Drupal, sezvo chiri chishandiso chinoita nyore maitiro ekugadzira SEO inoshamwaridzika HTML uye ma URL.
Pfupi padivi… Drupal ingori chishandiso. Ichapa maficha uye mashandiro anodikanwa ekumisikidza uye kumhanyisa webhusaiti. Izvo hazvizokunyorere makuru makuru ako. Izvo zvichiri kwauri. Chinhu chimwe chete chinhu iwe chaungaite kukanganisa chero chinzvimbo cheSEO chine ruzivo rwakanyorwa zvakanaka, rune musoro wenyaya, uye rwakagadzirwa nguva nenguva.
Tags: cmszvemukati manejimendi systemdrupalDrupal yekutsvaga injini optimizationDrupal seoseo
John ndiye Chief weCommunity Creation pa Vadivelu Comedy Truffle Media. Truffle Media Networks inopa Ag Media Iwe Unogona Kushandisa, kuburikidza nemhando yepamusoro, kugadzirwa kwetkey uye kugoverwa kwezvekurima bhizinesi rinotarisana nenhau midhiya.
ChaCha + iPhone: Nyevero, Geography, Mhinduro, Kugovana
Google Ads Policy - Tevedzera Iwo Mitemo!
Apr 26, 2011 pa 9: 33 PM
Warevesa, John… injini dzekutsvaga HAZVINE basa kuti CMS yako chii. Nekudaro, mushure mekushanda neakawanda emukati manejimendi masisitimu, ndinogona kukuudza kuti kune akawanda echikuru masisitimu kunze pamusika asina maficha anodiwa kuti anyatso optimize iwo. Kugona kugadzirisa marobhoti.txt, sitemaps.xml, pinging injini dzekutsvaga, kufomatisa mapeji (pasina marongerwo etafura), kugadzirisa kumhanya kwepeji, kugadzirisa meta data… uchaona kuti masisitimu akawanda ekutonga zvinhu anomanikidza vashandisi vawo. Nekuda kweizvozvo, mutengi anoshanda nesimba pane izvo zvisina kukwidziridzwa zvizere.
Apr 28, 2011 pa 12: 55 PM
Waita hako, John. Ndinosangana nemibvunzo yakawanda paQuora uye nevamwe iyo CMS yakanakira SEO. Mhinduro yacho ingori chero ipi zvayo itsva yemukati manejimendi masisitimu ane kugona kugadzira maURL akachena uye kushandisa akawanda ezvishandiso izvo injini dzekutsvaga dzinoda kushandisa.
@Doug - uri right futi. Vakuru vezvemukati manejimendi masisitimu anowanzo shaya kugona kuita nemazvo muSEO.
Mune zvimwe zviitiko, kunyange yemazuva ano CMS inogona kuva isina kunaka, kana zvishoma, isingasviki optimum mhedzisiro paSEO.
Joomla, semuenzaniso, ine marongero ekugadzira saiti-yakafara meta tsananguro iyo inozoiswa kune yega peji apo munyori asingagadziri tsika meta tsananguro. Izvi zvaita kuti vamwe vatengi vangu vafunge kuti vaisada kugadzira tsananguro dzakagadzirirwa peji.
Kune munyori wezvinyorwa ane ruzivo, iyi haingave nyaya. Nekudaro, ese masisitimu ekugadzirisa zvemukati anodzikisira bar kune vanyori, zvichiita kuti vanyori vasina ruzivo vape zvavo zvemukati, vasingazive nezve optimization zvinonetsa.
Gumiguru 21, 2011 pa 1:10 AM
Zvakanaka maCMS ari kuburitsa iyo HTML saka zvechokwadi anokanganisa SEO. Drupal marwadzo akazara kugadzirisa zvakanaka SEO, kune chero chaunogona kudoma. xml sitemaps, maURL ane hushamwari (anogara achidzokera ku/node), akazvimirira maURL/peji mazita/misoro, img alt tags, blogging (usaite kuti nditange, kubhuroga muDrupal hakuna chinhu paWP).
Isu tinoda Drupal yemasaiti makuru, asi hazvinakidze kuSEO'ify. WP iri nyore mune zvenyeredzi.